Home Wararka Cabdirashiid Janaan” Dowladda waxa ay ku mashquulsantahay Aroos Qaran”
Cabdirashiid Janaan” Dowladda waxa ay ku mashquulsantahay Aroos Qaran”
Wasiirka Amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janaan ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in aysan waxba kala socon Xaaladda Ammaanka ee Somaaliya xilli dhibaatooyin badan ay la kulmaayaan Ciidamada dowladda.
Waxaa uu sheegay in ay muhiimn tahay in la helo dowlad la socota Xaaladda Ammaan ee Soomaaliya iyo guud ahaan Xaaladdaha dalka.
Dowladda hadda ay jirto ayuu ku eedeeyay ay ku mashquulsan tahay Baraha Bulshadda ,islamarkaana ay ka jawaabto oo kaliya waxyaabaha ay ku aragto Baraha bulshadda.
Janan ayaa xusay in maalmihii lasoo dhaafay Al-Shabaab dad Shacab ah ay ku dileen degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, dowladda Soomaaliyana ay ku mashquushay aroos Qaran.
Previous articleFaahfaahin:Haweenay lagu dilay Gaalkacyo
Next articleAqriso:Xisbi oo hogaaminayo Xasan Sheekh oo looga dhawaaqay Muqdisho